आजको राशिफल : २०७५ चैत्र १८ गते साेमबार::Independent News Portal from Nepal.
पं. ज्यो. ध्रुवशरण ढुंगाना
आज मिति २०७५ चैत्र १८ गते साेमबार तदनुसार १ अप्रिल २०१९ विरोधकृतनाम संवत्सर रवि उत्तरायण, बसन्तऋतु , चैत्रकृष्णपक्ष, तिथि – एकादशी २ घडी ४ पला, बिहान ६ वजेर ४७ मिनेट सम्म , नक्षत्र – धनिष्ठा ४१ घडी १४ पला, साँझ १० वजेर २७ मिनेट सम्म, योग – साध्य , करण – कौलव आनन्दादीयोग – शुभ , चन्द्रमा – मकर राशिमा बिहन ९ वजेर ८ मिनेट सम्म पश्चात् कुम्भमा , सूर्य– मीनराशिमा , बृहस्पति – धनुराशिमा, सूर्य उदय विहान ५ वजेर ५७ मिनेटमा, सूर्यास्त – सायं ६ वजेर २० मिनेटमा ।
चन्द्रमा – दक्षिणादिशा बिहन ९ वजेर ८ मिनेट सम्म पश्चात् पश्चिममा जानेछन् ।
योगिनी – अाग्नेय दिशा ।
कालराहु – वायव्य दिशामा ।
दिशाशूल– पूर्व दिशामा ।
अाज पाप माेचनी एकादशीब्रत ( पञ्चक प्रारभ पाँचदिन )
राहुकाल – बिहान ७ वजेर २९ मिनेट देखि ९ वजेर २ मिनेट सम्म । अशुभ
यमघण्टा – बिहान १० वजेर ३५ मिनेट देखि दिनकाे १२ वजेर ८ मिनेट सम्म । अशुभ
गुलीककाल– दिनकाे १ वजेर ४१ मिनेट देखि दिनको ३ वजेर १४ मिनेट सम्म । सौम्य
अभिजितमुहूर्त – विहान ११ वजेर ४३ मिनेट देखि दिनकाे १२ वजेर ३३ मिनेट सम्म ।
अमृत वेला विहान ५ वजेर ५५ मिनेट देखि ७ वजेर २९ मिनेट सम्म ।
काल वेला विहान ७ वजेर २९ मिनेट देखि ९ वजेर २ मिनेट सम्म ।
शुभ वेला विहान ९ वजेर २ मिनेट देखि १० वजेर ३५ मिनेट सम्म ।
राेग वेला विहान १० वजेर ३५ मिनेट देखि दिनको १२ वजेर ८ मिनेट सम्म ।
उद्वेग वेला दिनको १२ वजेर ८ मिनेट देखि दिनको १ वजेर ४१ मिनेट सम्म ।
चर वेला दिनको १ वजेर ४१ मिनेट देखि ३ वजेर १४ मिनेट सम्म ।
लाभ वेला दिनको ३ वजेर १४ मिनेट देखि ४ वजेर ४७ मिनेट सम्म ।
अमृत वेला ४ वजेर ४७ मिनेट देखि ६ वजेर २० मिनेट सम्म ।
राजकीयकाम कार्यमा सफलता मिल्ने छ , वाद विवादमा विजय हासिल हाेला । वाेलिकाे प्रभाव वढेर जाला, पैतृक संम्पतिवाट गरिएकाे व्यवसायले सफलता दिलाउने छ । प्रसंशनिय कार्यकाे थालनी हाेला ।
बृष ( ई,उ,ए,अाे,चा,ची,बु,वे,वाे )
साेचेकाे काम सफल गर्न धेरै दाैड धुप गर्नु पर्ला , मानसिक चिन्तामा वृद्धि हाेला । कामकाे दाैड धुपले थकानकाे महसुुस हाेला, बिद्यामा रुचि नजाला, १० वजे पछिकाे समय भने राम्राे हुनेछ ।
मिथुन ( का,कि,कू,घ,ङ,छ,के,काे,हा)
बिहान १० वजे सम्म अष्टम चन्दमाले स्वास्थमा प्रतिकुल असर गर्ला, धुलाे, धुवा वाट बिशेष ख्याल राख्नु पर्ने हुन्छ । सवारी साधनबाट विशेष सावधान हुनुपर्ला अाफन्त भनेका हरुले नै खुट्टा तान्ने छन् । घरमा अापसि मतभेदे पैदा हाेल ।
अचनक यात्राकाे अवसर जुट्न सक्छ तर छाेटाे दुरीकाे यात्रावाट लाभ मिल्ने संभावना देखिन्छ । प्रेममा मधुरता अाउनेछ, घरमा खुसीकाे माहाेल वन्नेछ ।वाहन तथा चाैपाय वाट लाभ लिने दिन रहेकाे छ । दिनमा भने अनेकौ झन्झटले पिछा गर्ने छन् ।
पुरानाे चलिरहेको राेग छ भने राेग वाट छुट्कारा मिल्ने छ । विराेधी हरुकाे मन अाफुतिर अाकर्षित गर्न सकिने छ । पराेपकार मन मनजानेछ, अाफन्तकाे अागमन हाेला ।
व्यावसायिक उन्नतिमा अवराेध अाउन सक्छ, साेचेकाे काम नवन्नाले मनमा खिन्नता अाउने हुन्छ । बिद्यार्थीकाे लागि विद्यामा रुचि नजाने हाेला । पुत्रपाैत्रकाे साथ सहयाेगकाे खासै फल अाउने छैन । १० वजे पछिकाे समय भने तपाईंको अनकुल रहनेछ ।
तुला ( रा,री,रु,रे,राे,ता,ती,तू,ते)
विहानकाे समयमा अामाकाे स्वास्थ्य कमजाेर हुन सक्छ , पेटमा पीडा अाउन सक्नेछ । परिवारिक साना तिन काममा दिन वित्नेछ, पाटर्नरमा गरिएकाे व्यवसायमा अवराेध अाउनेछ तर दिनमा भने कार्यहरु वन्नेछन् ।
बृश्चिक ( ताे,ना,नी,नू,ने,नाे,या,यी,यू)
दाजु भाइहरुकाे सहयाेगले कुनै पनि राेकिएकाे काम वन्नेछ, वित्तीय क्षत्रकाे काराेवार गर्ने हरुका लागि राम्राे समय रहेकाे छ । पठन पाठनकाे क्षेत्रवाट राम्राे हाेला, शरीर निराेगी रहला । दिनमा भने विपरीत फल अाउनेछ ।
शारीरिक अाराेग्यतामा कमजाेरी अाउनेछ , अाफ्ना नजिक भनेका हरुले अपेक्षा गरेकाे सहयाेग गर्ने छैनन् । यात्रामा खर्च तथा कष्ट अधिक हुने सम्भावना रहेकाे छ सावधानी अपनाउनु राम्राे हाेला । विहान झन्झट भय पनि दिन भने राम्राे हाेला ।
बिहानकाे समयमा मात्र मान सम्मान इज्जतमा वृद्धि हाेला । सामाजिक काममा समय खर्चिने दिन रहेकाे छ, उमङ्ग, जाेशमा वृद्धि हुनेछ । व्यापारमा वृद्धि हाेला, अाफन्तकाे अागमले मनमा घरमा खुसीयालि छाउला । दिनमा भने विपरित फल मिल्नेछ ।
वाेलिकाे प्रभाव घट्ने भएका कारण कम वाेल्दा राम्राे हाेला , सम्मानमा अाँचअाउने काम नगरेकाे वेश । चाेट पटक लाग्न सक्ने दिन भएकाले वाटाे घाटाेमा सावधानी अपनाउनु राम्राे , प्रेममा धाेका हुन सक्छ । बिहान केही असजिलाे महशुस भएपनि दिनमा भने महत्व पूर्ण कार्य बन्नेछन् ।
मीन ( दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दाे,चा,ची)
नवीन कार्य तथा व्यवसायमा लगानि गर्नु लाभदायका दिन देखिन्छ, छर छिमेकीकाे सहयाेगले कुनै महत्त्वपूर्ण सम्पन्न हाेला । महत्त्वपूर्ण यात्रा हुनेछ, वैदेशिक कार्यमा केही सकारात्मक संकेत मिल्नेछ । कुनै पनि राम्राेकार्यकाे लागि विहानकाे समय ठिक छ, दिन भने खासै राम्राे हुदैन ।
प्रकाशित मिति : सोमवार, चैत्र १८, २०७५ , ८:५० बजे